Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1416
PM Ravelonarivo : “Be ny zava-bita”
“Raha tantaraina ny zava-bita, ho alina eto ny andro”, hoy ny Praiminisitra Ravelonarivo tamin’ny anjara fitenenany teny Iavoloha, omaly, tamin’ny fanolorana ny tahirin-kevitra misy 40 takila mahery ny asa vitan’ny governemanta nandritra ny taona 2015. Na izany aza, nambarany ny zava-bita momba ny tany tan-dalàna sy ny fahaiza-mitantana raharaham-panjakana: fanajana ny zon’olombelona, ady amin’ny kolikoly… […]
Anisan’ny noraisin’ny filoha teo aloha, Ravalomanana, afakomaly teny Faravohitra, ny iraka manokana avy amin’ny Vondrona afrikanina, Lakdhar Brahimi. Nambarany ny tokony hanohizana ny fampiharana ny sori-dalana. Ankoatra izany, anisan’ny nanontaniany ny filoha teo aloha ny fahitana ny fahantrana eto amintsika sy ny fametrahana ny tany tan-dalàna. « Tsy misy ny fifampitokisana eo amin’ny samy Malagasy. Fa […]
“Tsy lavina, ao anaty fahasahiranana ny firenentsika. Temerin-doza roa na telo ny firenena noho ny tsy fandriampahalemana, ny loza voajanahary mateti-pitranga, ny aretina isan-karazany, ny olana samihafa… Sarotra ny taona 2015 nivalona iny”, hoy ny filohan’ny Antenimierampirenena, Rakotomamonjy Jean-Max, tamin’ny lanonana fifampiarahabana teny Iavoloha, omaly. Koa ndeha hiarahantsika miatrika ny ho avy. Mba tena hipaka […]
Ny Praiminisitra teo aloha sady mpitarika ny Hiaraka isika, ny Jly Camille Vital : Ho hita eo ny fanatanterahana ny voalazan’ny filoham-pirenena, araka ireny lahateniny ireny. Aoka mba ho firenena tan-dalàna sy hanaraka lalàmpanorenana isika. Manantena izany avokoa ny vahoaka malagasy amin’ny fijerena ny hoaviny… Nambara fa niova fo ny dahalo. Mbola mirongatra anefa izany amin’izao […]
“Miara-manonofy isika, indray andro any: tsy mila intsony ny fiombonambe iraisam-pirenena ny vahoaka malagasy izay manana ny fahaleovantenany sy ny fiandrianam-pireneny. Tsy hiankin-doha sy hiantehitra amin’ny fanampiana ny any ivelany.” Io no nambaran’ny solontenan’ny masoivoho vahiny, ny ambasadaoron’i Maraoka, Mohammed Amar, teny Iavoloha, omaly. Miankina amin’ny Malagasy ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Hatramin’ny nahatongavany, tsy mitsaha-mamaky […]
Vao manomboka ny taona vaovao, tsy misy farany ny resaka politika: mampifanditra, mampifandroritra… Fositra amin’izany ny amin’ny fifidianana loholona. Na ny eo anivon’ny Ceni aza, miaiky ny fahamaroan’ny fahadisoana: biletà tokana misy marika manokana tsy araka ny lalàna, fitanana an-tsoratra misy hosoka niniana… Mitaky ny hamerenana tanteraka ny fifidianana loholona ireo kandidà Malagasy miara-miainga, Tim, […]
Ampy handraisana ireo mpivarotra ny toerana any anatin’ny tsena Pochard na Petite Vitesse sy ny tsena isan’andro, toy ny any Mahamasina sy Andravoahangy, ary misy ny lamina efa napetraka amin’izany. Raha nizotra tsara ny fanesorana ny mpivarotra ny fiandohan’ny herinandro teo, tsy nanaiky kosa ny ampahany omaly. Ho an’ny boriborintany I, 300 ny mpivarotra amoron-dalana […]
Tampoka ho an’ny mpanjifa! Mbola tao anatin’ny fiatrehana ny fetin’ny faran’ny taona ny rehetra no nahalala tamin’ny alalan’ny fanambarana nivoaka an-gazety, fa hisondrotra ny saram-pifandraisana ho an’ny tambajotra Orange Madagascar. Maro koa anefa ireo tsy nahalala sy tsy niomana akory, kanefa hiatra manomboka ny 14 janoary izao ny fisondrotana, raha ny voalaza ao anatin’ny fanambarana. […]
Nanamarika ny lanonana teny Iavoloha, omaly ny fahabangan’ny sezan’ireo filoha teo aloha, ny Pr Zafy sy Ratsiraka ary Rajoelina. Samy nahazo fanasana avokoa anefa izy ireo. Samy eto an-toerana koa, eny Ivandry sy Faravohitra ihany anefa ny Profesora sy ny amiraly. Misy dikany ara-politika izany ? Voalaza fa hanana ny hambarany amin’izao fiandohan’ny taona izao […]
“Aody ry mpitondra, ampiasao amin’ny mahasoa anay ny volanay. Aza lalaovinareo ny fiainanay…”, hoy ny santionan’ireo soratra nentin’ny olom-pirenena sy ny Wake up manoloana ny tsy fankasitrahan’izy ireo ny lanonana teny Iavoloha, omaly… Hetsika tanaty filaminana. Fandaharan-dovia tsy misy na inona na inona no nentin’ireo olom-pirenena sy ny Wake up Madagasacar ho fanoherana ny […]
Manao ranolava. Tafapetraka, omaly eny amin’ny HCC Ambohidahy ny fitoriana sy fitarainan’ny antoko Monima momba ny hosoka sy fihoaram-pefy tamin’ny fifidianana loholona teo. Nitondra izany ny mpisolovava, Rasoavololona Voahangy. «Novorin’ny minisitra sy ny lehiben’ny faritra ary ny sefo distrika tao amin’ny biraom-panjakana iray ireo mpifidy vaventy rehetra, nialoha ny fampielezan-kevitra ka nampisafidianana hifidy ny HVM […]
Par Taratra sur 09/01/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Faran’ny omby, hena; faran’ny teny, ifanatrehana. Kabary, zato; teny, arivo. Iray ihany ny marina: iaraha-mahita ny asa vita. Mby aiza? Manantena ny vahoaka, fa be izay fanamby izay: hanorina an’itsy, hanarina an’iroa. Tsy misy fandaharanasa ratsy, fa ny tsy fanatanterahana azy… Mahavelona ny fampanantenana sy ny fanantenana, saingy mandreraka sy mamono rehefa efa ho lava […]
Zazakely telo taona sy tapany tao amin’ny fianakaviana iray maty vokatry ny fihinanana poizina tsy nahy tao Ambohidava, distrikan’Antsirabe I ny alakamisy lasa teo. Olona roa hafa koa mbola tsaboina eny amin’ny Hopitaly Atsimo Antsirabe amin’izao fotoana izao vokatr’io fanapoizinana ara-tsakafo tsy nahy io. Fantatra fa mpitsimpona tavoahangy plastika sy fatim-by eny amin’ireny fanariam-pako ireny no […]
Par Taratra sur 09/01/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Nahery vaika kokoa ny fifandonana teo amin’ny mpivarotra amoron-dalana sy ny polisy kaominaly teny Analakely, teo anoloan’ny lapan’ny Tanàna omaly. Nandeha be ny feo fa misy andian’olona mikasa handoro ny lapan’ny Tanàna. Voatery niditra an-tsehatra ny Emmo/Reg sy ny polisy … Nisavorovoro teny Analakely omaly, teo anoloan’ny lapan’ny Tanàna, noho ny fifandonana teo amin’ny […]
« Précédent 1 … 1 414 1 415 1 416 1 417 1 418 … 1 422 Suivant »